कपाल हटाउने प्रक्रिया पछि कपाल फेरि बढ्छ। तपाइँ एक सही तरिकामा हुन सक्नुहुन्न - प्राविधिक जानकारी शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड।
कपाल हटाउने प्रक्रिया पछि कपाल फेरि बढ्छ। तपाईं सहि तरिकाले गर्न सक्नुहुन्न
समय: 2021-01-06 हिट्स: 2
यस युगमा जुन सबै मानिसहरूले आफ्नो उपस्थितिको ख्याल राख्छन्, कपाल हटाउने पहिले नै एक सौन्दर्य वस्तु भएको छ जुन सामान्यतया युवाहरूले अनुसरण गरेका छन्। के तपाईं अझै कपाल हटाउनको लागि सेभर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? कृपया यो बिर्सनुहोस्, तपाईंलाई दुर्घटनावश चोट पुग्नेछ। वा तपाइँ बीवक्स प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? जिओ नुओ कपाल हटाउने मोमको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छ। मैनको मुख्य घटकहरू मोम, पेट्रोलियम जेली र अन्य पदार्थहरू हुन्। मुख्य प्रिसीपलले केशलाई उखाल्न केही सामग्रीहरू प्रयोग गर्दैछ। यसैले मोम कपाल हटाउने भनेको कपाल मेकानिकललाई बाहिर निकाल्ने जत्तिकै हो, जसले कडा पीडा महसुस गराउनेछ, जुन वास्तवमै अधिकांश व्यक्तिहरूको लागि अस्वीकार्य हो। बीउक्स कपाल हटाउने प्रक्रियाले केहि संक्रमित र ईन्फ्लेमेसनमा केहि स्थानीय कपाल फोलिकाहरू निम्त्याउन सक्छ। थप रूपमा मोममा रहेको केहि रासायनिक कम्पोनेन्टहरूले छालामा एलर्जीको प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्न सक्दछ।
जब तपाईं माथिका कपाल हटाउने विधिहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईंले पाउनुभयो कि केशहरू केहि दिनमा फेरि फेरि हुर्कियो। त्यसोभए किन हामी कपाल हटाउनको लागि सुरक्षित र पीडारहित विधि छनौट गर्न सक्दैनौं। आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण एक राम्रो राम्रो विकल्प हो, यसले कडा पल्सेड प्रकाश प्रयोग गर्दछ, फोटोनले एपिडर्मिसमा प्रवेश गर्न सक्दछ र गर्मी उत्पादन गर्न र कपालको फोलिकल्स नष्ट गर्न डर्मिसमा कपालको कपालले अवशोषित गर्दछ। कपाल हटाउने प्रभाव परम्परागत कपाल हटाउने विधि भन्दा सुरक्षित र अधिक टिकाऊ हो।
आईपीएल विधिमा आधारित, जिओ नुओले तपाईंको लागि निम्न सिफारिसहरूको सारांश प्रस्तुत गर्दछ:
१. कपाल हटाउने प्रक्रिया एक पटकको काम गर्दैन। कपाल वृद्धि आवधिक छ। तपाईंले कपाल हटाउन सही समय छनौट गर्नुपर्नेछ। कपालको विकास चक्र मा विभाजित गरिएको छ: वृद्धि अवधि, प्रतिगमन अवधि, र स्थिर अवधि। जब हामी गृह फोटोन कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गर्दछौं, यो समय अन्तरालमा गरिनुपर्दछ, र स्थायी कपाल हटाउने प्रभाव प्राप्त गर्न यसलाई पालन गर्नै पर्दछ।
२. प्रायः माथि रहँदा, मसलादार खाना र खराब जीवनशैलीको बानीले केश उत्पन्न गर्दछ। केही फरक पर्दैन तपाईं कपाल हटाउने कुन विधि प्रयोग गर्नुहुन्छ, यदि तपाईं ढिलो रहनको खराब बानीबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्न भने, तपाईंले याद गर्नुहुनेछ कि तपाईको टाउकोको कपाल कम र शरीरको कपाल हुनेछ। त्यो किनभने शरीर ढिलो सम्म रहँदा शरीर तनावको स्थितिमा हुन्छ, जसले पुरुष हार्मोनको अत्यधिक स्राव निम्त्याउँछ, जो कपालको फोलिकल्समा एन्ड्रोजेन-रूपान्तरण गर्ने एन्जाइमको क्रिया अन्तर्गत डायहाइड्रोटोस्टेरोन र डायहाइड्रोजनमा रूपान्तरण हुनेछ। टेस्टोस्टेरोनमा रमाईलो र दोश्रो प्रभाव कपालको वृद्धि मा दोहोर प्रभाव छ। यसले दाह्री क्षेत्रमा कपाल कोशिकाको विकासलाई प्रोत्साहित गर्दछ; तसर्थ, हाम्रो शरीर को खातिर, हामी एक राम्रो जीवन बानी विकास गर्न आवश्यक छ!
त्यहाँ केहि अन्य साना विवरणहरू छन्। उदाहरण को लागी, कपाल हटाउने उत्पादनहरु को उपयोग धेरै पटक हुँदैन, सामान्यतया 1-2 हप्तामा; प्रयोग पछि, सूर्य सुरक्षा ध्यान दिनुहोस्। माथिको रूपमा गर्नाले कपाल हटाउनको लागि दुई पटक परिणाम हुन्छ।
अघिल्लो: कपाल हटाउने उपकरणहरूको लागि प्रयोग संख्याको सीमा छ?
अर्को: कपाल हटाउन पछि हामीले के मर्मत गर्नुपर्छ